Celebrity Archives - ShwengweGames
အပွုံးခြိုခြိုလေးတှနေဲ့ မွငျသူတိုငျးရဲ့ ရငျကို အေးမွသှားစခေဲ့တဲ့ စံထိပျထားဦးရဲ့ ခဈြစရာ ပုံရိပျလေးမြား
January 12, 2022 by Shwengwe Games
ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ မွငျသူတိုငျးကို အခဈြပိုစတေဲ့ ပွညျသူ့အသညျးကြျော အနုပညာရှငျတှထေဲမှာ စံထိပျထားဦးလညျး အပါအဝငျပါပဲ ။
ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အလှတရားလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အပွငျ ကလေးလေးလို ဖွူစငျတဲ့အပွုံးလှလှလေးတှနေဲ့ ခဈြစရာကောငျးတာလေးတှကွေောငျ့လညျး ပုရိသပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးလေးတှကွှေဆေငျးနရေတာပါ ။
စံထိပျထားဦးက အခုဆိုရငျ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို လုပျကိုငျနပွေီဖွဈပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကိုလညျးရရှိနပွေီဖွဈပါတယျနျော။ထိပျထိပျလေးက ပညာရေးဘကျမှာလညျး ထူးခြှနျတဲ့ သူလေးဖွဈတဲ့အပွငျ ရိုးရိုးအေးအေးလေးနဲ့နထေိုငျတတျတဲ့သူဖွဈတာကွောငျ့ မမေခေိုငျသငျးကွညျတဈယောကျအခဈြတှပေိုပွီးရငျးပိုနရေတာလညျးဖွဈပါတယျ။
အခုလညျး ပရိသတျတှကေို အလှမျးပွေ အနနေဲ့ ခဈြစရာပုံရိပျတှကေို ဝမြှေလာပါတယျ ။ ပုံလေးတှေ တိုငျးမှာ အပွုံးခြိုခြိုလေးတှရေယျ ခဈြစရာ ဟနျပနျအမူအရာ လေးတှေ အပွညျ့နဲ့ ထိပျထိပျလေး တဈယောကျ လနျးလှနျးနတော အမှနျပါပဲ ။ ပရိသတျကွီး အတှကျ ထိပျထားလေးရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေိုမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ ။
ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ မြင်သူတိုင်းကို အချစ်ပိုစေတဲ့ ပြည်သူ့အသည်းကျော် အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ စံထိပ်ထားဦးလည်း အပါအဝင်ပါပဲ ။
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ကလေးလေးလို ဖြူစင်တဲ့ အပြုံးလှလှလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတာလေးတွေကြောင့်လည်း ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းလေးတွေကြွေဆင်းနေရတာပါ ။
စံထိပ်ထားဦးက အခုဆိုရင် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုလည်း ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။ ထိပ်ထိပ်လေးက ပညာရေးဘက်မှာလည်း ထူးချွန်တဲ့ သူလေးဖြစ်တဲ့အပြင် ရိုးရိုးအေးအေးလေးနဲ့ နေထိုင်တတ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် မေမေခိုင်သင်းကြည်တစ်ယောက် အချစ်တွေပိုပြီးရင်းပိုနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း ပရိသတ်တွေကို အလွမ်းပြေ အနေနဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှလာပါတယ် ။ ပုံလေးတွေ တိုင်းမှာ အပြုံးချိုချိုလေးတွေရယ် ချစ်စရာ ဟန်ပန်အမူအရာ လေးတွေ အပြည့်နဲ့ ထိပ်ထိပ်လေး တစ်ယောက် လန်းလွန်းနေတာ အမှန်ပါပဲ ။ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ထိပ်ထားလေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။
Categories Celebrities Tags Celebrity, San Htate Htar Oo Leaveacomment
မငျးသားကွီး Sean Connery ရဲ့ ဘယျ James Bond ဇာတျကားတှဟော အကောငျးဆုံးဖွဈမလဲ
Sean Connery ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့စနနေေ့ မနကျခငျး သူ့အသကျ (၉၀) နှဈအရှယျမှာ ဆုံးပါးသှားခဲ့ရပါတယျ။ သူဟာ James Bond ဇာတျကောငျအဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ဇာတျကား (၆) ကားနဲ့ ရုပျရှငျလောကမှာ ငှကွေယျပှငျ့ဖွဈလာခဲ့ရသူပါ။
တခွားသော The Man Who Would Be King၊ Robing and Marion၊ The Untouchables၊ Indiana Jones and the Last Crusade၊ The Russia House၊ The Rock၊ Playing by Heart၊ Finding Forrester စတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတှကေိုလညျး ရိုကျကူးခဲ့သူဖွဈပမေယျ့ ဒီမငျးသားကွီးရဲ့နာမညျကို ကွားရငျတော့ ပရိသတျတှကေ တခွားမဟုတျတဲ့ James Bond ဇာတျကောငျနဲ့ပဲ ပွေးမွငျကွမှာအမှနျပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီပို့ဈမှာတော့ James Bond အဖွဈ သူ့ဇာတျကား (၆) ကားကို အကောငျးဆုံးဇာတျကားကနေ စလို့ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
007 အတှကျတော့ တရားမဝငျဇာတျကားတဈခုဖွဈပွီး Warner Bros ကစီစဉျထုတျဝကော ဒါရိုကျတာ Irvin Kershner (The Empire Strikes Back) က ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ ဇာတျညှနျးရေးသားသူကတော့ Lorenzo Semple Jr. (The Parallax View၊ Three Days of the Condor) ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ Thunderball ကို တုပပွီးပွနျရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားပါ။ ဒီလိုဖွဈရတဲ့အကွောငျးကလညျး Kevin McClory က James Bond အတှကျ ရိုကျကူးခှငျ့အကုနျလုံးကို ပိုငျဆိုငျထားလို့ပါပဲ။ ဒီဇာတျကားမှာ အသကျ (၅၃) နှဈအရှယျ Sean Connery ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး နာမညျပေါကျအောငျ ကြျောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဒါကလညျး အမှတျရစရာအကောငျးဆုံး 007 ဇာတျကားတဈကားဖွဈပွီး ဇာတျကွောငျး၊ ထုတျလုပျမှုဒီဇိုငျးနဲ့ ကောကျကဈြမှုအရတော့ Lewis Gilbert ရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီဇာတျကားဟာ “စိတျကူးယဉျ Bond ဇာတျကွောငျး” ပုံစံတဈခုလုံးကို ပုံဖျောပေးလိုကျတာပါပဲ။
“SPECTRE က အာကာသယာဉျတဈစငျးကို ပွနျပေးဆှဲပွီး America နဲ့ Russia ကို အခငျြးခငျြးတိုကျခိုကျစအေောငျ ဖနျတီးယူတယျ” ဆိုတဲ့ ဇာတျကှကျဟာ 007 ဇာတျကားအတှကျတငျမဟာတျပဲ စိတျကူးယဉျ အကျရှငျဇာတျကားတိုငျးအတှကျ အခွခေံဇာတျကွောငျးကွီးတဈခု ဖွဈလာပါတော့တယျ။
ပွီးရိုကျကူးမှုပုံစံအရလညျး မီးတောငျဂူကွီးတှေ၊ အလှနျကောကျကဈြတဲ့ ဗီလိနျပုံစံတှဟော Superhero နဲ့ Spy ဇာတျကားတှအေတှကျ လမျးကွောငျးသဈဖောကျပေးလိုကျသလိုပါပဲ။
Guy Hamilton ရိုကျကူးတဲ့ ဒီဇာတျကားကတော့ တခွား James Bond ဇာတျကားဆကျတှလေို Superhero ဆနျဆနျမဟုတျတော့ပဲ သူလြှိူပုံစံမြိုး ပိုဆနျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ငါ့အနနေဲ့တော့တခွားသူတှလေောကျ ဒီဇာတျကားအပျေါ မနှဈသကျရတဲ့အကွောငျးအရငျးကဇာတျကားတလြှောကျလုံးမှာ Connery ရဲ့ Bond ဟာ သူကိုယျတိုငျ စလှုပျရှားတာမြိုးမလုပျပဲ တခွားသူတှစေတငျ လှုပျရှားတာကိုသာ စောငျ့နတေဲ့ပုံစံမြိုး ဖွဈနတောကွောငျ့ပါပဲ။ဒါတောငျမှဒီဇာတျကားဟာ 007 ဇာတျကားကောငျးတဈကား ဖွဈနဆေဲပါပဲ။
ဒီဇာတျကားကတော့ နောကျလာမယျ့ဇာတျကားကောငျးတှရေဲ့ အစပါပဲ။ Terrence Young ရဲ့ သှယျလပြမေယျ့ ရိုကျစကျခကျြတှကွေောငျ့ ဒီဇာတျကားဟာ ရသပိုပွီးပွညျ့စုံလာသလို Hitchcock ရဲ့ထုံးစံတဈခုဖွဈတဲ့ “လူမှားတဈယောကျ ထှကျပွေးနရေတယျ”ဇာတျကွောငျးမြိုးကိုလညျး ယူထားပါသေးတယျ။ Sean Connery အနနေဲ့ကတော့ သူ့ရဲ့ပုံမှနျ သှေးအေးအေးနဲ့ခကျထနျတဲ့ပုံက ဇာတျလမျးနဲ့အကိုကျဖွဈနတောပါပဲ။
Goldfinger ဟာ Sean Connery ကို James Bond ဇာတျကားဆကျတှမှောပါဝငျနိုငျဖို့ ဝငျငှရေဇာတျကားတဈကားဖွဈခဲ့သလို Terence Young ရဲ့ Thunderball ဇာတျကားဟာဆိုရငျတော့ Hollywood ဇာတျကားတှထေဲမှာ အကွီးကယျြဆုံးဇာတျကားတဈကားဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒီဇာတျကားမှာတော့ SPECTRE အနနေဲ့ “ကမ်ဘာကွီးတဈခုလုံးကို စိုးမိုးဖို့” ဆိုတဲ့ ဇာတျကွောငျးကို ပထမဆုံးရိုကျကူးခဲ့တာပါ။ ဒီဇာတျကားမှာ Oscar ဆုသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ ရအေောကျတိုကျခိုကျခနျးတဈခု ပါဝငျခဲ့ပွီး ဒီရိုကျကှကျဟာဆိုရငျ ဒီနအေ့ထိ ကွညျ့ရှုလို့ကောငျးနဆေဲဖွဈပါတယျ။
Terence Young ဟာ လကျတှဖွေ့ဈနိုငျတဲ့ဇာတျကို လကျတှထေ့ကျကွီးကယျြတဲ့ အကျရှငျဇာတျကှကျတှနေဲ့ ရိုကျကူးသှားခဲ့တာပါ။ အမရေိကနျသမ်မတကွီး John F. Kennedy ရဲ့အကွိုကျဆုံးဝတ်ထုတဈပုဒျကတော့ From Russia with Love ဖွဈသလို
ွဒီဇာတျကားကလညျး Dallas ကနေ နိုငျဝငျဘာ ၁၉၆၃ မှာ လယောဉျနဲ့မသှားခငျ သူနောကျဆုံးကွညျ့ခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားဟာဆိုရငျ အကောငျးဆုံး 007 ဇာတျကားတဈကားဖွဈပွီး Sean Connery ရဲ့အကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနပေါတယျ။
Sean Connery ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ မနက်ခင်း သူ့အသက် (၉၀) နှစ်အရွယ်မှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ James Bond ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား (၆) ကားနဲ့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ ငွေကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာခဲ့ရသူပါ။
တခြားသော The Man Who Would Be King၊ Robing and Marion၊ The Untouchables၊ Indiana Jones and the Last Crusade၊ The Russia House၊ The Rock၊ Playing by Heart၊ Finding Forrester စတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်ပေမယ့် ဒီမင်းသားကြီးရဲ့နာမည်ကို ကြားရင်တော့ ပရိသတ်တွေက တခြားမဟုတ်တဲ့ James Bond ဇာတ်ကောင်နဲ့ပဲ ပြေးမြင်ကြမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီပို့စ်မှာတော့ James Bond အဖြစ် သူ့ဇာတ်ကား (၆) ကားကို အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားကနေ စလို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
007 အတွက်တော့ တရားမဝင်ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး Warner Bros ကစီစဉ်ထုတ်ဝေကာ ဒါရိုက်တာ Irvin Kershner (The Empire Strikes Back) က ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားသူကတော့ Lorenzo Semple Jr. (The Parallax View၊ Three Days of the Condor) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Thunderball ကို တုပပြီးပြန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကလည်း Kevin McClory က James Bond အတွက် ရိုက်ကူးခွင့်အကုန်လုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ အသက် (၅၃) နှစ်အရွယ် Sean Connery ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နာမည်ပေါက်အောင် ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကလည်း အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံး 007 ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်းနဲ့ ကောက်ကျစ်မှုအရတော့ Lewis Gilbert ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ “စိတ်ကူးယဉ် Bond ဇာတ်ကြောင်း” ပုံစံတစ်ခုလုံးကို ပုံဖော်ပေးလိုက်တာပါပဲ။
“SPECTRE က အာကာသယာဉ်တစ်စင်းကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး America နဲ့ Russia ကို အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်စေအောင် ဖန်တီးယူတယ်” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကွက်ဟာ 007 ဇာတ်ကားအတွက်တင်မဟာတ်ပဲ စိတ်ကူးယဉ် အက်ရှင်ဇာတ်ကားတိုင်းအတွက် အခြေခံဇာတ်ကြောင်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ပြီးရိုက်ကူးမှုပုံစံအရလည်း မီးတောင်ဂူကြီးတွေ၊ အလွန်ကောက်ကျစ်တဲ့ ဗီလိန်ပုံစံတွေဟာ Superhero နဲ့ Spy ဇာတ်ကားတွေအတွက် လမ်းကြောင်းသစ်ဖောက်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
Guy Hamilton ရိုက်ကူးတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကတော့ တခြား James Bond ဇာတ်ကားဆက်တွေလို Superhero ဆန်ဆန်မဟုတ်တော့ပဲ သူလျှိူပုံစံမျိုး ပိုဆန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့အနေနဲ့တော့ တခြားသူတွေလောက် ဒီဇာတ်ကားအပေါ် မနှစ်သက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းက ဇာတ်ကားတလျှောက်လုံးမှာ Connery ရဲ့ Bond ဟာ သူကိုယ်တိုင် စလှုပ်ရှားတာမျိုးမလုပ်ပဲ တခြားသူတွေစတင် လှုပ်ရှားတာကိုသာ စောင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါပဲ။ ဒါတောင်မှ ဒီဇာတ်ကားဟာ 007 ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ နောက်လာမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတွေရဲ့ အစပါပဲ။ Terrence Young ရဲ့ သွယ်လျပေမယ့် ရိုက်စက်ချက်တွေကြောင့် ဒီဇာတ်ကားဟာ ရသပိုပြီးပြည့်စုံလာသလို Hitchcock ရဲ့ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “လူမှားတစ်ယောက် ထွက်ပြေးနေရတယ်” ဇာတ်ကြောင်းမျိုးကိုလည်း ယူထားပါသေးတယ်။ Sean Connery အနေနဲ့ကတော့ သူ့ရဲ့ပုံမှန် သွေးအေးအေးနဲ့ခက်ထန်တဲ့ပုံက ဇာတ်လမ်းနဲ့အကိုက်ဖြစ်နေတာပါပဲ။
Goldfinger ဟာ Sean Connery ကို James Bond ဇာတ်ကားဆက်တွေမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ ဝင်ငွေရဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့သလို Terence Young ရဲ့ Thunderball ဇာတ်ကားဟာဆိုရင်တော့ Hollywood ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ အကြီးကျယ်ဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ SPECTRE အနေနဲ့ “ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို စိုးမိုးဖို့” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကို ပထမဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ Oscar ဆုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရေအောက်တိုက်ခိုက်ခန်းတစ်ခု ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဒီရိုက်ကွက်ဟာဆိုရင် ဒီနေ့အထိ ကြည့်ရှုလို့ကောင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Terence Young ဟာ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဇာတ်ကို လက်တွေ့ထက်ကြီးကျယ်တဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးသွားခဲ့တာပါ။ အမေရိကန်သမ္မတကြီး John F. Kennedy ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကတော့ From Russia with Love ဖြစ်သလို
ဒီဇာတ်ကားကလည်း Dallas ကနေ နိုင်ဝင်ဘာ ၁၉၆၃ မှာ လေယာဉ်နဲ့မသွားခင် သူနောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင် အကောင်းဆုံး 007 ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး Sean Connery ရဲ့အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။
Categories Celebrities Tags 007, Celebrity, Diamonds Are Forever, Dr. No, From Russia With Love, Goldfinger, James Bond, Sean Connery, Tunderball, You Only Live Twice Leaveacomment
Juction City မှာ လကျမလညျအောငျရောငျးကောငျးနတေဲ့ သရုပျဆောငျ ရဲလေးမ ရဲ့ မုနျ့ဟငျးခါး
ဟာသသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ရဲလေးမကတော့ သူ့ရဲ့အနုပညာနာမညျ ရဲလေးကနေ ရဲလေးမဆိုပွီး အမညျတှငျသညျ့တိုငျအောငျ မိနျးမလြာကာရိုကျတာနဲ့ အောငျမွငျခဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
အနုပညာလောကမှာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ အောငျမွငျသူတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ လကျရှိအနုပညာအလုပျတှရှေားပါးနခြေိနျမှာတော့ ရဲလေးမဟာ ဝမျးရေးအတှကျ အလုပျတှမြေိုးစုံကို လုပျကိုငျနသေူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီတဈခေါကျမှာလညျး ရဲလေးမက ရနျကုနျမွိုလညျခေါငျက Juction City ကုနျတိုကျကွီးမှာ မုနျ့ဟငျးခါးလကျမလညျအောငျ ရောငျးခဲ့ရကွောငျးကို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။
ရဲလေးမက “ဒီနလေ့ညျး စားမယျ့သူတှကေစောငျ့နကွေရတယျ။ လကျမလညျအောငျရောငျးခဲ့ရတယျ။ အနျတီမိုမိုမွငျ့အောငျရဲ့တူမလေးဝါဆိုမွငျ့အောငျလေး လာအားပေးသှားတယျ။
ပဈတိုငျးထောငျသီခငျြးလေးထဲကလေးလေး ခုအပြိုကွီးဖွဈလိုခဈြစရာလေး။ ခုလညျးကြေးဇူးပါနျော။ လာအားပေးတဲ့ခဈြတဲ့သူတှအေားလုံးကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျနျော။ နောကျနှဈရကျရှိနပေါဦးမယျနျော” ဆိုပွီး ဝမျးသာစှာပွောလာပါတယျ။
ရဲလေးမကတော့ သမာအာဇီဝကကြ စြေးရောငျးစားရငျး စတေနာအကြိုးပေးတာကွောငျ့ ရနျကုနျမွိုလညျခေါငျက ကုနျတိုကျကွီးမှာတောငျ မုနျ့ဟငျးခါးလကျမလညျအောငျ ရောငျးခနြိုငျခဲ့တာ ပရိသတျကွီးမကျြမွငျကိုယျတှပေ့ါပဲနျော။
ဟာသသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရဲလေးမကတော့ သူ့ရဲ့အနုပညာနာမည် ရဲလေးကနေ ရဲလေးမဆိုပြီး အမည်တွင်သည့်တိုင်အောင် မိန်းမလျာကာရိုက်တာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိအနုပညာအလုပ်တွေရှားပါးနေချိန်မှာတော့ ရဲလေးမဟာ ဝမ်းရေးအတွက် အလုပ်တွေမျိုးစုံကို လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ရဲလေးမက ရန်ကုန်မြိုလည်ခေါင်က Juction City ကုန်တိုက်ကြီးမှာ မုန့်ဟင်းခါးလက်မလည်အောင် ရောင်းခဲ့ရကြောင်းကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
ရဲလေးမက “ဒီနေ့လည်း စားမယ့်သူတွေကစောင့်နေကြရတယ်။ လက်မလည်အောင်ရောင်းခဲ့ရတယ်။ အန်တီမိုမိုမြင့်အောင်ရဲ့တူမလေးဝါဆိုမြင့်အောင်လေး လာအားပေးသွားတယ်။
ပစ်တိုင်းထောင်သီချင်းလေးထဲကလေးလေး ခုအပျိုကြီးဖြစ်လိုချစ်စရာလေး။ ခုလည်းကျေးဇူးပါနော်။ လာအားပေးတဲ့ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ နောက်နှစ်ရက်ရှိနေပါဦးမယ်နော်” ဆိုပြီး ဝမ်းသာစွာပြောလာပါတယ်။
ရဲလေးမကတော့ သမာအာဇီဝကျကျ ဈေးရောင်းစားရင်း စေတနာအကျိုးပေးတာကြောင့် ရန်ကုန်မြိုလည်ခေါင်က ကုန်တိုက်ကြီးမှာတောင် မုန့်ဟင်းခါးလက်မလည်အောင် ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာ ပရိသတ်ကြီးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါပဲနော်။
Categories Celebrities Tags Celebrity, Ye Lay Ma, ရဲလေးမ Leaveacomment
ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိနဲ့ ညို့ယူဖမျးစားထားတဲ့ လုလုအောငျရဲ့ ကမျးခွအေထကျက အမိုကျစားပုံရိပျမြား
ပုရိသပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားနတေဲ့ Sexy မျောဒယျမလေး လုလုအောငျဆိုတာ ခဈြစရာလညျးကောငျးသလို ဆှဲဆောငျမှု ညှို့အားတှပွေညျ့နတေဲ့ သူလေးတဈယောကျပါပဲနျော။
သူမက လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ လညျး အားပေးတဲ့ ပရိသတျတှေ အခိုငျအမာရရှိထားပွီးတော့ အမိုကျစားဗီဒီယိုဖိုငျလေးတှနေဲ့ ပုံလေးတှကေိုလညျး မကွာခဏမြှဝပေေးလရှေိ့ပါတယျနျော။
လှပလှနျးတဲ့ကောကျကွောငျးတှအေပွငျ မကျြနှာလေးကလညျး ခဈြစရာကောငျးပွီး အပွဈကငျးစငျလှနျးတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ခေးကွီးလုလုအောငျရဲ့ အမိုကျစား sexy ကကြပြုံလေးတှကေို ယောင်ျကြားလေးပရိသတျတှေ အမြားဆုံး တဈခဲနကျအားပေးခွငျးခံရတာလညျးဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့တငျးတငျး ရငျးရငျးနဲ့ လှပတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ကောကျကွောငျးတှကွေောငျ့ ပုရိသတှကွေားမှာ ရပေနျးစားနတောပဲဖွဈပါတယျ။ အခုလညျး ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိနဲ့ ညို့ယူဖမျးစားထားတဲ့ ကမျးခွအေထကျက အမိုကျစား ပုံလေးတှကေိုဖျောပွထားတာတှရေ့ပါတယျ ။ ပုံတိုငျးက ရငျခုနျစရာ ကောငျးလှနျးတာကွောငျ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ပုရိသပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ Sexy မော်ဒယ်မလေး လုလုအောင်ဆိုတာ ချစ်စရာလည်းကောင်းသလို ဆွဲဆောင်မှု ညှို့အားတွေပြည့်နေတဲ့ သူလေးတစ်ယောက်ပါပဲနော်။
သူမက လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ လည်း အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာရရှိထားပြီးတော့ အမိုက်စားဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း မကြာခဏမျှဝေပေးလေ့ရှိပါတယ်နော်။
လှပလွန်းတဲ့ကောက်ကြောင်းတွေအပြင် မျက်နှာလေးကလည်း ချစ်စရာကောင်းပြီး အပြစ်ကင်းစင်လွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
‌ခေးကြီးလုလုအောင်ရဲ့ အမိုက်စား sexy ကျကျပုံလေးတွေကို ယောင်္ကျားလေးပရိသတ်တွေ အများဆုံး တစ်ခဲနက်အားပေးခြင်းခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့တင်းတင်း ရင်းရင်းနဲ့ လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းတွေကြောင့် ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ ကမ်းခြေအထက်က အမိုက်စား ပုံလေးတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် ။ ပုံတိုင်းက ရင်ခုန်စရာ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Categories Celebrities Tags Celebrity, Lu Lu Aung, လုလုအောငျ Leaveacomment
သမီးပြျောတယျ..ဘာလောကဓံကွုံကွုံ သမီးကနြေပျတယျ.ဖဖေသေ့မီးဖွဈရတာ.ဂုဏျယူတယျ .ဖဖေေ.ခေါငျးမာတာရော..ဘဝနာတာရော.ဘာတှတေူရတူရဖဖေနှေငျ့သာတူရမယျဆို.ဒီနာမညျလေးကိုတသကျလုံးတမွတျတနိုးနှငျ့ သသေညျအထိသမီးအရာရာကို အကောငျးဆုံး ဖွတျကြျောပွသှားမယျ..ဖဖေကေ သမီးအတှကျ တဘဝစာ လမျးပွခဲ့သူ.HERO ကွီးပါဖဖေရေယျ🙏🙏🙏S.Y. T. T”
ဤနသေ့ညျ…အဂျါနဖွေ့ဈပါသောကွောငျ့.အဂျါဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှအဂျါသားသမီးအပေါငျးတို့၏ကိုယျစား .. .. ပဌာနျးကမျြးတျောမွတျ၅ကမျြးအားရှတျပှါးပူဇျော၍လညျးကောငျး..သံဗုဒ်ဓေ ၉၀၀၀၀.. သရဏဂုံ ၉၀၀၀၀.ရကျ ၉၀ အဓိဌာနျဖွငျ့၎င်းငျး.မဟာဝဒေဗ်ဗရတနာမဏ်ဏာနျနှငျ့ ပထဝီဇယမဏ်ဏာနျတျောမွတျကို ရကျ၉၀အဓိဌာနျဖွငျ့၎င်းငျး.
Source Shwe Yee Thein Tan
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းတွေနဲ့ ဂီတမှတ်တိုင်ကြီးကြီးမားမားကို စိုက်ထူထားနိုင်သူ တေးသံရှင် တွံ့တေးသိန်းတန်ကတော့ လူသေသွားပေမယ့် သူ့ရဲ့ နာမည်နဲ့ သီချင်းတွေက ပရိသတ်တွေကြားမှာ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ရှင်သန်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တွံ့တေးသိန်းတန်ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ရွှေရည်သိန်းတန်ကလည်း ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အနုပညာကို အမွေတွေကို ဆက်ခံထားနိုင်သူဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့မှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ဂန္တဝင်အဆိုတော်ကြီး တွံတေးသိန်းတန်ကွယ်လွန်သွားတာ (၂၃)နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
သမီးဖြစ်သူရွှေရည်သိန်းတန်ကတော့ ဖခင်ကြီး(၂၃)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့လေးမှာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဖခင်ကြီးကို လွမ်းဆွတ်တမ်းတနေကြောင်း အခုလိုပဲရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။
“ဖေဖေ..၂၃ နှစ်ပြည့်ပြီတဲ့..တနေ့မှမမေ့သလို..ပူလောင်မှုတွေကြုံလာတိုင်းမျက်ရည်တွေကျရတိုင်းအကြိမ်ကြိမ် လဲပြိုရတိုင်းဖေဖေပေးတဲ့စိတ်ခွန်အားတွေနှင့်အကြိမ်ကြိမ်တည့်မတ်..ရုန်းထဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရတာလည်း၂၃နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့ဖေဖေရယ်..
သမီးနှင့် အဖေက လက္ခဏာရော.ဇာတာပါတူတယ်..သမီးနာမည်အနောက်မှာ မင်းနာမည်ပါရင်.သူ့ဘဝ ကြမ်းလိမ့်မယ်လို့ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးမိန့်ခဲ့တုန်းကအဖေရော သမီးပါ ခေါင်းမာမာနှင့် မှတ်ပုံတင်ထဲအထိရွှေရည်သိန်းတန် လို့အဖေနာမည်ပေးခဲ့တာကို အမြဲသတိရတယ်ဖေဖေ..
သမီးပျော်တယ်..ဘာလောကဓံကြုံကြုံ သမီးကျေနပ်တယ်..ဖေဖေ့သမီးဖြစ်ရတာ.ဂုဏ်ယူတယ် ..ဖေဖေ..ခေါင်းမာတာရော..ဘဝနာတာရော..ဘာတွေတူရတူရဖေဖေနှင့်သာတူရမယ်ဆို….ဒီနာမည်လေးကိုတသက်လုံးတမြတ်တနိုးနှင့် သေသည်အထိသမီးအရာရာကို အကောင်းဆုံး ဖြတ်ကျော်ပြသွားမယ်..ဖေဖေက သမီးအတွက် တဘဝစာ လမ်းပြခဲ့သူ..HERO ကြီးပါဖေဖေရယ်🙏🙏🙏S.Y. T. T”
ဒါ့အပြင် ရွှေရည်သိန်းတန်က ရောက်လေရာအရပ်တိုင်းမှာ ဖခင်ဖြစ်သူအတွက်ရည်စူးပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ် အမြဲလုပ်ဖြစ်ပုံကိုလည်းယခုလိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
ဤနေ့သည်…အဂ်ါနေ့ဖြစ်ပါသောကြောင့်.အဂ်ါဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွအဂ်ါသားသမီးအပေါင်းတို့၏ကိုယ်စား ပဌာန်းကျမ်းတော်မြတ်၅ကျမ်းအားရွတ်ပွါးပူဇော်၍လည်းကောင်း..သံဗုဒ္ဓေ ၉၀၀၀၀.. သရဏဂုံ ၉၀၀၀၀.ရက် ၉၀ အဓိဌာန်ဖြင့်၎င်း.မဟာဝေဒဗ္ဗရတနာမဏ္ဏာန်နှင့် ပထဝီဇယမဏ္ဏာန်တော်မြတ်ကို ရက်၉၀အဓိဌာန်ဖြင့်၎င်း.
မေတ္တာသုတ်ပရိတ်တော်မြတ်ကို..၁၀၈ ကြိမ်တိတိရွတ်ပွားပူဇော်ပါ၏.ဤကောင်းမှုကြောင့်..အဂ်ါ ဂြိုလ်မင်းကြီးနှင့်တကွ..အဂ်ါ သားသမီးအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်၎င်း..အဂ်ါနေ့ဖွားအနုပညာရှင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်၎င်း..အဂ်ါနေ့ဖွားရတနာလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးကြသူ..ဝတ်ဆင်ကြသူအပေါင်းတို့သည်၎င်း.ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ..
Categories Celebrities Tags Celebrity, Shwe Yee Thein Tan, ရှရေညျသိနျးတနျ Leaveacomment
ဆေးရုံတကျနရေတဲ့ သားလေး ခိုငျဇှဲခနျ့မောငျရဲ့ ဝမျးသားစရာသတငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
ပရိသတျကွီးရေ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ မိဘတှရေဲ့စှနျ့ပဈခွငျးကို ခံရတဲ့ ရငျခှငျမဲ့ လူမမယျကလေးငယျတှကေို မိခငျအရငျသဖှယျမတ်ေတာတှပေေးကာစောငျ့ရှောကျနခေဲ့တာပရိသတျတှတှေမွေ့ငျတဲ့အတိုငျးပါပဲနျော။
ကလေးတှကေို သားသမီးအရငျးအဖှယျ စတေနာအပွညျ့နဲ့ စောငျ့ရှောကျတဲ့ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ စိတျဓာတျလေးက တျောရုံလူတှမှော မရှိနိုငျတဲ့ စိတျလေးပါ။ကလေးတှကေို ပွုစုစောငျ့ရှောကျရုံသာမက ကနျြးမာရေးမကောငျးတဲ့ ကလေးတှကေိုလညျး ရောဂါတှပေါ ကုသပေးနခေဲ့ပါသေးတယျ။
လတျတလောမှာလညျး သူ့ရဲ့ကလေးတှထေဲက သားလေး ခိုငျဇှဲခနျ့မောငျ လေးက ကနျြးမာရေးမကောငျးတာကွောငျ့ ဆေးကုသမှုခံယူနခေဲ့ရပါတယျ။ သိုပမေဲ့ လကျရှိမှာ သားလေးက ကနျြးမာရေးလညျးကောငျးမှနျလာပွီး ရောဂါ ဝဒေနာတှလေညျး သကျသာနပွေီဖွဈတဲ့အတှကျ ဆေးရုံက ဆငျရပါတော့မယျတဲ့။
ခိုငျနှငျးဝကေတော့ သားလေး ခိုငျဇှဲခနျ့မောငျကို ခဈြကွတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ သားလေးဆေးရုံဆငျးခှငျ့ရပွီဖွဈတဲ့ ဒီသတငျးကောငျးလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ မြှဝဖေျောပွထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ သားလေးကို တကျရောကျကုသခှငျ့ပေးတဲ့ ရနျကငျးကလေးဆေးရုံကွီးကိုလညျး ခိုငျနှငျးဝကေ ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောထားပါသေးတယျ။
ပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ မိဘတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံရတဲ့ ရင်ခွင်မဲ့ လူမမယ်ကလေးငယ်တွေကို မိခင်အရင်သဖွယ်မေတ္တာတွေပေးကာစောင့်ရှောက်နေခဲ့တာပရိသတ်တွေတွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်။
ကလေးတွေကို သားသမီးအရင်းအဖွယ် စေတနာအပြည့်နဲ့ စောင့်ရှောက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးက တော်ရုံလူတွေမှာ မရှိနိုင်တဲ့ စိတ်လေးပါ။ကလေးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရုံသာမက ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်း ရောဂါတွေပါ ကုသပေးနေခဲ့ပါသေးတယ်။
လတ်တလောမှာလည်း သူ့ရဲ့ကလေးတွေထဲက သားလေး ခိုင်ဇွဲခန့်မောင် လေးက ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့ရပါတယ်။ သိုပေမဲ့ လက်ရှိမှာ သားလေးက ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းမွန်လာပြီး ရောဂါ ဝေဒနာတွေလည်း သက်သာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးရုံက ဆင်ရပါတော့မယ်တဲ့။
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သားလေး ခိုင်ဇွဲခန့်မောင်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သားလေးဆေးရုံဆင်းခွင့်ရပြီဖြစ်တဲ့ ဒီသတင်းကောင်းလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ သားလေးကို တက်ရောက်ကုသခွင့်ပေးတဲ့ ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးကိုလည်း ခိုင်နှင်းဝေက ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောထားပါသေးတယ်။
Categories Celebrities Tags Celebrity, Khine Hnin Wai, ခိုငျနှငျးဝေ Leaveacomment